Petrogenesis: inona izany, toetra sy karazana fananganana vato | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 25/03/2021 11:26 | Haibolantany
Androany isika dia hiresaka momba ny iray amin'ireo sampan'ny haolojika izay mifantoka amin'ny fandalinana ny vatolampy, ny niandohana, ny fananganana ary ny fananana ara-batana sy simika ary koa ny fizarana ny hoditry ny tany. Ity sampana geolojia ity dia antsoina hoe petrology. Ny teny petrology dia avy amin'ny petro azo ampiharina izay dikan'ny vato sy avy amin'ny logo izay dikan'ny hoe fianarana. Misy fahasamihafana amin'ny lithology izay mifantoka amin'ny firafitry ny vatolampy faritra iray. Amin'ny petrolojia ny petrogenesis. Momba ny niandohan'ireo vatolampy ireo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra rehetra, ny fiaviany ary ny fandalinana petrogenesis.
2 Ny niandohan'ny petrology sy petrogenesis
3 Fandinihana momba ny petrolojia
4 Karazana petrogenesis
Ny petrolojia dia mizara ho faritra maro miavaka arakaraka ny karazam-bato hianarana. Noho izany, misy sampana roa amin'ny fizarana ny fandalinana dia ny petrolojia vato sedimentary sy ny petrology ny vatobe igneous ary metamorphic. Ny voalohany dia fantatra amin'ny anarana petrology exogenous ary ny faharoa amin'ny petrology endogenous. Misy ihany koa ny sampana hafa izay miovaova arakaraka ny tanjona naroso amin'ny fandinihana vato. Misy ihany koa ny karazana petrografia ho an'ny famaritana ny vato sy ny petrogenesis hamantarana ny niandohany.
Petrogenesis dia lafiny iray manan-danja satria io no fananganana sy fiavian'ny vato. Toy ny misy ihany koa petrology ampiasaina izay mifantoka amin'ny toetra biolojika ny vato. Tokony ho ao an-tsaina fa ny fahalalana tsara ny fananana voajanahary amin'ny vatolampy dia azo ampiasaina amin'ny faritra maro izay manandanja ihany koa, toy ny fananganana sy fitrandrahana loharanon-karena ho an'ny olombelona.
Noho izany, ity sampan'ny siansa ity dia tena zava-dehibe hatrizay ny vatolampy dia ny fanohanana ifotony ny rafitr'olombelona rehetra. Zava-dehibe ny fahalalana ny firafitra, ny fiaviany ary ny firafitr'ireo vato izay apetratsika sy iorenantsika ireo fotodrafitrasa. Alohan'ny hanatanterahana karazana fananganana trano, fotodrafitrasa sns. Ny fandinihana mialoha ny karazana vato misy eo am-pototry ny fananganana dia tsy maintsy atao mba hisorohana ny filentehana anaty rano, tondra-drano, loza, fihotsahan'ny tany sns. Ny vatolampy koa dia akora tena ilaina amin'ny asa indostrialy maha-olona.
Ny niandohan'ny petrology sy petrogenesis
Ny fahalianana amin'ny vato dia teo foana tamin'ny zanak'olombelona. Izy io dia singa tsy miova amin'ny tontolo voajanahary izay nahatonga ny haitao hivoatra hatramin'ny andron'ny vanim-potoana. Ny fitaovana voalohany nataon'olombelona dia vita tamin'ny vato ary niteraka vanim-potoana iray manontolo. Fantatra amin'ny vanim-potoana vato izy io. Ny fandraisana anjara mba hahafantarana ny fampiasana ny vatolampy dia nandroso indrindra tany Chine, Gresy ary ny kolontsaina Arabo. Ny tontolo tandrefana dia manasongadina ny asa soratr'i Aristotle izay itenenan'izy ireo ny mahasoa azy ireo.
Na dia izany aza, na dia efa niara-niasa tamin'ny tany aza ny olombelona hatramin'ny vanim-potoana talohan'ny tantaram-piainana, ny niandohan'ny petrôlôjia ho siansa dia mifandray akaiky amin'ny niavian'ny jeolojia. Ny haitao no siansa renim-pianakaviana ary natambatra tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo rehefa nanomboka nametraka ny fitsipiny rehetra. Petrolojia ho an'ny ary avy amin'ny adihevitra siantifika nivoatra teo anelanelan'ny niandohan'ny vato. Amin'ity resabe ity dia nisy toby roa nipoitra izay fantatra amin'ny anarana hoe Neptunists sy Plutonists.
Neptunists dia ireo izay milaza fa ny vato dia avy amin'ny sedimentation ny antsanga ary ny fikolokoloana mineraly avy amin'ny ranomasina taloha izay nandrakotra ny planeta iray manontolo. Noho io antony io, dia fantatra amin'ny anarana hoe Neptunist izy ireo, izay manondro ny andriamanitra romana an'ny ranomasina Neptune. Etsy ankilany manana ny Plutonists isika. Mihevitra izy ireo fa ny niandohan'ny vato dia manomboka amin'ny magma amin'ny sosona lalina indrindra amin'ny planetantsika vokatry ny hafanana ambony. Ny anaran'ny Plutonists dia avy amin'ny andriamanitra romana any ambanin'ny tany Pluto.
Ny fahalalana maoderina indrindra sy ny fivoaran'ny teknolojia dia mamela antsika hahatakatra fa ireo toerana roa ireo dia mety hanana fanazavana momba ny zava-misy. Ary ny vato sedimentary dia mipoitra amin'ny alàlan'ny dingana mifandraika amin'ny intuitions izay nananan'ny Neptunists, raha ny vatolampy vatosoa volkanika sy ny plastonic ary ny metamorphic dia nipoitra tamin'ny fizotrany nifanandrify tamin'ny tohan-kevitr'ireo plutonista.
Fandinihana momba ny petrolojia
Raha vantany vao fantatsika hoe inona ny niandohana sy ny toerana samihafa amin'ny petrolojia, dia ho hitantsika izay tanjon'ny fandinihana. Manarona ny fiandohan'ny vato sy ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny rafitr'izy ireo. Izy ireo dia mampiditra ny fiandohana, ny fizotrany mamokatra azy, ny toerana ao amin'ny lithosfera misy azy ireo sy ny taonany. Izy io koa dia tompon'andraikitra amin'ny fandinihana ireo singa sy toetra ara-batana sy simika an'ny vato. Ny sehatry ny fandinihana farany tsy dia manandanja loatra dia ny fizarana sy ny petrogenesisan'ny vato ao amin'ny keraky ny tany.
Ao anatin'ny petrolojia dia dinihina ihany koa ny petrogenesisan'ny vatolampy extraterrestrial. Ireo rehetra ireo no vatolampy avy eny amin'ny habakabaka. Raha ny marina, ny vatolampy izay avy amin'ny meteorite sy ny volana no dinihina ankehitriny.
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, misy sampana maro amin'ity siansa ity ary voasokajy ho fizotran'ny petrogenesis 3 izy ireo izay manome vato: vatolampy sedimentary, igneous ary metamorphic. Noho izany, miankina amin'ny faritra niavian'ny karazan-karazam-bato tsirairay, misy sampana petrolika roa:
Exogenous: dia miandraikitra ny fandalinana ireo vatolampy rehetra izay avy amin'ny sosona farany ambany amin'ny tany. Izany hoe tompon'andraikitra amin'ny fandalinana ireo vato sedimentary. Ireo karazam-bato ireo dia namboarina avy amin'ny famoretana ny antsanga aorian'ny fametrahana azy ireo sy ny fitateran'ny mpiasan'ny jeolojika toy ny orana sy ny rivotra. Ireo sediment ireo dia napetraka an-tapitrisany taona maro. Ambonin'izany rehetra izany dia mitranga amin'ny haavon'ny haavo ambany indrindra toy ny farihy sy ny ranomasina. Ary ireo sosona nifandimby dia nanorotoro, nanindry ny antsanga nandritra ny taona an-tapitrisany.
Endogenous: Izy io no tompon'andraikitra amin'ny fandinihana ireo karazana vatolampy izay miorina amin'ny sosona lalina indrindra amin'ny crust sy ny akanjon'ny tany. Eto isika dia samy manana vatolampy igneous volkanika sy plutonic, vato metamorphic. Raha misy vatobe igneous dia miakatra izy ireo noho ny tsindry anatiny amin'ny alàlan'ny triatra sy ny cool, mamorona vato. Raha tonga eo ambonin'ny volon'ny volkano izy ireo dia vatolampy volkano. Raha ateraky ny atitany izy ireo dia vato plutonic. Ny vatolampy metamorphic dia avy amin'ny vato igneous na sedimentary izay niharan'ny tsindry sy mari-pana lehibe. Izy ireo dia vatolampy misy karazany roa izay niforona tamin'ny halaliny lalina. Ireo fepetra rehetra ireo dia miteraka fiovana amin'ny firafiny sy ny firafiny.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny petrogenesis sy ny karazany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haibolantany » Petrogenesis
Solstice sy equinoxes